वर्षौं अघि सबैलाई थाहा थियो कि पृथ्वी समतल छ, सबैलाई थाहा थियो कि सूर्य पृथ्वीको चारैतिर घुम्छ, र आज सबैलाई थाहा छ कि पृथ्वीमा जीवन या त अनियमित विकासको परिणाम हो वा अलौकिक ईश्वरको काम हो। वा यो हो? “डिजाइनरहरूको सन्देश” मा, राएलले हामीलाई १3.3 मा उनको युएफओ मुठभेडको समयमा प्राप्त गरेको विशाल रकमको जानकारी प्रस्तुत गर्दछ जुन तेस्रो विकल्प हो: पृथ्वीमा भएका सबै जीवनहरू अन्य संसारका उन्नत वैज्ञानिकहरूले सिर्जना गरेको थियो।
पूरै श्रृंखलामा पहिलो पुस्तक, उत्तम यो पुस्तक पहिलो पढ्नको लागि।
कृपया नोट गर्नुहोस्: Amazon.com बाट उपलब्ध पेपरब्याक संस्करणमा फोटोहरू यो ई-बुकमा फेला परेन।
अन्तरिक्षवारीलाई स्वागत गरौं
तिनीहरूले आनुवंशिक रूपमा पृथ्वीमा सबै जीवन सिर्जना गरे। हामी समावेश !!!
यो खण्ड, उनको तेस्रो पुस्तक, years बर्ष पछि प्रकाशित भयो, सूचना सहित एलोहिमले उनलाई भविष्यका प्रकाशनहरू राख्न अनुरोध गरेको थियो। यसले यी विवादास्पद प्रश्नहरूको विस्तृत जवाफ पनि प्रदान गर्दछ जुन यी असाधारण प्रारम्भिक खुलासेहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। “स्वागत एलियन” को वर्तमान प्रकाशन त्यस्तो समयमा आउँदछ जुन हाम्रो आफ्नै आनुवंशिक ईन्जिनियरि investigations अनुसन्धानले सिमाना पार गर्न थाल्छ, यो प्रकाशनले हामीलाई हाम्रो विगतको र नयाँ समझको नयाँ युगको मार्ग देखाएर पूर्ण अर्थमा लिन्छ। हाम्रो भविष्य को।
हामी वरपर रहेको तथा हामी जेबाट बनेका छौँ, त्यही अनन्त तथा अपरिमेयसँग मानवहरू इन्द्रिय मार्फत् हामी मानवहरू जोडिएका हुन्छौँ । हामीले आफ्ना इन्द्रियहरुको विकास गऱ्यौँ भने अनन्त, अपरिपेयसँग जोडिने तथा आफूभित्र नै त्यसको अनुभूति गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्छौँ ।
इन्द्रियहरूको उपयोग गर्दै गर्ने ध्यान भनेको हामीलाई हाम्रो मस्तिष्कमा रहेका एकरूपताका सम्भावनाहरूलाई पहिल्याउन सिकाउन हामीलाई उक्त ध्यानको विधि दिइएको ज्ञान हो । यो ध्यानको बारेमा हामीलाई सिकाउने गुरु उनै हुन् जसले मानवलाई बनाए र जसलाई सबै कुरा थाहा छ ।
इन्द्रियहरूको प्रयोग गरी गर्ने ध्यानले गल्तीका विषयमा रहेका इसाई, यहुदीहरूको संकोचबाट निस्कन र पूर्वीय सिकाइले प्रवर्द्धन गर्ने रहस्यमयी सुन्दरतामा नफसीकन कुनै व्यक्तिलाई आफ्ना इन्द्रियहरूको बारेमा बढी पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ । यसले व्यक्तिलाई आफ्नो शरीरको प्रयोग गरी आवाज, रङ, वासना, स्वाद, छुवाइ र विशेष गरी यौनिकताको अनुभूति गर्नसक्ने बनाउँछन् । यस्तो तरिकाले हामीले पारसांसारिक चरम सुखानुभूति जुन अनन्त तथा अपरिमेय छ त्यस्तो अनुभव गर्न मद्दत गर्छ । त्यस्तो चरणमा पुग्ने व्यक्तिको अनन्त तथा अपरिमेयसँग जोडाइकन मस्तिष्क झलमल बनाउँछ ।
मानव क्लोनिङलाई समर्थन
आजको नयाँ क्लोनिंग टेक्नोलोजी अमरत्व वा अनन्त जीवनको खोजीको लागि पहिलो चरण हो।
विगतका धर्महरूले पौराणिक प्रमोदवनमा मृत्यु पछि मात्र कसम खाए भन्ने कुरा पृथ्वीमा चाँडै नै वैज्ञानिक यथार्थ हुनेछ – यो राएलको चुनौतीपूर्ण निष्कर्ष हो जुन विज्ञानले कसरी हाम्रो सबै जीवनमा क्रान्ति ल्याउने छ भन्ने कुराको एउटा अप्ठ्यारो र विस्तृत समीक्षामा छ।
दुर्लभ दर्शनको साथ, राएलले अद्भुत भविष्यको विवरण स्केच गर्दछ जुन हाम्रो उत्तरी प्रविधिले क्रान्ति र विश्वलाई रूपान्तरण गर्दछ। नानोटेक्नोलोजीले कृषि र भारी उद्योगलाई बेमानी बनाउनेछ; अति कृत्रिम बुद्धिमत्ताले चाँडै मानव बुद्धिको पछाडि छोडिनेछ – र कुनै जैविक शरीरको आवश्यकता बिना कम्प्युटरमा अनन्त जीवन सम्भव हुनेछ!
यी घटनाक्रमहरू २२ औं शताब्दीको विज्ञान कल्पित कथा होइन। यो सबै आगामी २० बर्षमा हुनेछ – र यस पुस्तकको उद्देश्य भनेको कल्पना गर्न नसकिने सुन्दर संसारलाई स्वर्गमा परिणत गर्नका लागि तयार गर्नु हो, जहाँ कोही पनि फेरि काम गर्नुपर्दैन!
राएल, पूर्वानुमान गरिएको “पश्चिमका मैत्रेय”, उसले विगत years० बर्षमा सिकाएको धेरै राएलियन सेमिनारहरूबाट लिइएको यस अद्भुत पुस्तकमा आफ्ना शिक्षा र अन्तर्दृष्टि साझा गर्दछन्।
यस पुस्तकमा प्रेम, खुशी, निर्मलता, आध्यात्मिकता, चिन्तन, सिद्धताको मिथक, अहिंसा, विज्ञान, मायालु सम्बन्ध र अधिक धेरै सहित विषयहरूको एक विशाल कभर गरिएको छ। यो उसको वा उनको क्षमता विकास गर्न र अधिक पूरा गर्ने र रमाईलो जीवन बिताउन चाहने सबैको लागि आवश्यक पठन हो।
मानवको सृजिना वैज्ञानिकरुपमा भएको थियो - सत्य कथाको कार्टुन (पि.डि.एफ)
यहाँ तपाईं राएलको पुस्तकहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ
अन्य भाषाहरू (ई-पुस्तकहरू)